Home Wararka Xaaf oo laga saaray liiska musharaxiinta ku tartamaya Aqalka Sare
Xaaf oo laga saaray liiska musharaxiinta ku tartamaya Aqalka Sare
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay MOL, Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug, Axmad Ducaale Xaaf ayaa gabi ahaanba caawa laga saaray liiska musharaxiinta ku tartamaya kuraasta Aqalka Sare.
Cabdikarim Guuleed, Qoor-Qoor iyo RW Rooble ayaa si wadajira uga shaqeeyay in MW Xaaf dibada laga dhigo tartanka si loo xaqiijiyo in uu soo baxo Cabdi Cawaale Qaybdiid. Dhanka kale, Cabdikarin Guuleed oo ahaa shaqsigii ka dambeeyay burburk Galmdug ayaa hadana waxa uu horseed ka yahay in burbur cusub ku yimaado Galmudug.
Su’aasha isweydiinta u baahan ayaa ah MW Xaaf muxuu sameeyn doonaa, mar hadii aanan loo ogolaan doonin in uu qayb ka noqdo tartanka. Mid kamida saaxibada Qoor Qoor ayaa sheegay in ayan marnaba ku qamaari karin in MW Xaaf lagu daro doorashada sababtoo ah, mar hadii magaciisa lagu daro liiska tartanka, waxaan shaki ku jirin in isaga si fudud lagu dooran doono.